Apple gbagwojuru Music
Part 1: Gịnị bụ Apple gbagwojuru Music Service?
Part 2: The gbagwojuru na-aga na na Apple Music
Nkebi nke 3: Olee ịkwaga Apple music na songs na listi ọkpụkpọ?
Nkebi nke 4: Download gụgharia music free na TunesGo
Apple gbagwojuru music bụ a na ndenye aha dabeere music gụgharia ọrụ ma ọ bụ ngwa nke a na ekesịpde site na gbagwojuru electronic nkewa nke Apple Inc. Nke a na ọrụ e mbụ maara dị ka gbagwojuru Music nke e kwụsịrị mgbe Apple zụtara gbagwojuru na 2014. The ndebanye aha nke adị ahịa e kwagara ndị ọhụrụ otu mgbe na. Gbagwojuru Music si Apple awade ọrụ ọtụtụ ihe n'ọbá akwụkwọ nke ihe karịrị nde 20 songs nke nwere ike streamed on ina ndabere. Ọrụ nwekwara ike ibudata music na tracks maka offline playback.
Apple gbagwojuru music ọrụ bụ a ukwuu customizable n'elu ikpo okwu ebe ọrụ nwere ike inwe kwe nkwa si ọkachamara dabere na ha na-ege ntị àgwà na nwere ike inwe mmadụ curated listi ọkpụkpọ site na music akwụkwọ na ndị ọkachamara dị ka RAP Rada, Rolling nkume na fọk wdg Nke a na-a na-akwụ ụgwọ ọrụ nke na-efu $9.99 kwa ọnwa na $99.99 kwa afọ. Ọ bụ maka bụghị nanị Apple iPod ọrụ kamakwa iPad, iPhone, Mac, PC. Ọ bụkwa dị na android na Windows arụ ọrụ usoro na Sonos ekwuputala na gbagwojuru Music ga-adịghị anya na-akwado wireless ọkà okwu usoro na ya igba egbe. Ọzọ ikenyeneke mbiet ihe banyere Apple gbagwojuru Music bụ na ọ na-awade a ezinụlọ atụmatụ tagged na a price nke $14.99 site na nke upto 6 ndị mmadụ nwere ike ịkọrọ ha na ndenye aha.
Apple gbagwojuru Music wee dị ndụ mgbe Apple zụtara gbagwojuru Music Company na 2014. Nke a pụtara na ndị niile na ndị na-tụrụ ụtụ gbagwojuru Music nwere ime na Apple gbagwojuru Music site na-eme a mgbanwe. Na Apple ọhụrụ music gụgharia ngwa, dị mwute ikwu, gbagwojuru nwere na-aga ma nke a adịghị pụtara na ẹdude debanyere aha ga-eche ihu ụdị ọ bụla nke a ọnwụ. Ha ga-enwe ike ịnọgide ha akaụntụ, ha n'ọbá akwụkwọ, ha listi ọkpụkpọ na ọbụna ha aha akaụntụ mgbe ha ịgbanwee gaa na ọhụrụ ngwa. Apple Music na oru na June 30th 2015 na ekele mmelite na gbagwojuru Music ngwa n'ihi na iPhone, iPad na iPod aka, na-eji Mbugharị nnyemaaka e mewo ka mfe na ga gosi na-enye aka dị ka na-aga na ziri ezi bụ nchegbu.
Kwaa si music iOS ọrụ ga-akwalite ịkwaga n'elu na mgbe ha ga edebanye, ha dum akaụntụ gụnyere ihe nile listi ọkpụkpọ na songs zọpụta agēburu n'elu na bufee. Ozugbo mgbanwe na-aga site, na kwaa si music akaụntụ nke onye ọrụ ga-kagbuo na ejibeghi balances ga ma-etinyere ihe Apple Music ndenye aha ma ọ refunded site ụgbọelu dị ka AT & T. Dị ka ọdịnihu nke gbagwojuru bụ nchegbu, aha ga-adị ndụ dị ka 24/7, Beats1 redio n'ime Apple music ngwa.
Dị ka e kwuru n'elu, ẹdude gbagwojuru Music debanyere aha ga-ekwe ka ịkwaga Apple music ngwa site ihe dị mfe mgbanwe usoro. Ọ dị mma ịmara na ọrụ ga-enweghị hapụ ihe ọ bụla Ebe E Si Nweta nke ugbua e ugwo maka gbagwojuru Music ma ọ bụ zọpụta listi ọkpụkpọ na songs. Ị nwere ike ibugharị si gbagwojuru ka Apple naanị na ihe iPhone, iPad ma ọ bụ iPod Touch na iOS 8.4 na ọhụrụ update nke Naa Music ngwa. Soro nyere nzọụkwụ site nzọụkwụ usoro ịkwaga Apple music na songs na listi ọkpụkpọ site na Naa Music ngwa:
Nzọụkwụ 1: The nzọụkwụ mbụ bụ iji hụ na ị na-aka na iTunes na ngwaọrụ gị site na gị Apple ID.
Nzọụkwụ 2: nzọụkwụ ọzọ bụ na-emeghe gbagwojuru Music ngwa. Ọ bụrụ na ị na-adịghị aka na nke a na ngwa, mgbe ahụ, ị ​​ga-mkpa banye maka migrating ka Apple.
Nzọụkwụ 3: Enweta na Bido mgbe ị hụrụ ozi okwu na gbagwojuru Music bụ ugbu a Apple Music. Ọ bụrụ na ị na-adịghị ahụ a na ozi a ma ọ bụ Bido button, mgbe ahụ, ị ​​ga-mkpa enweta na View update mere na ị nwere ike imelite ka ọhụrụ version nke iOS.
Nzọụkwụ 4: Ugbu a enweta na onye otu ebe i nwere ike ịkwaga ezinụlọ atụmatụ naanị mgbe i sonyere Apple music. Ebe a, ị ga-enwe ike ịhụ otú ukwuu iTunes ụlọ ahịa Ebe E Si Nweta ị ga-enweta mgbe ị na-akpali.
Nzọụkwụ 5: nzọụkwụ ọzọ bụ ịbanye paswọọdụ gị nke Apple ID ka gosi ya na unu otu. Mgbe eme otú ahụ, music ngwa ga-emeghe ma na ịgba ụgwọ gị ga-melite ọma.
Mgbe ị na-ịkwaga Apple Music si gbagwojuru music, ụfọdụ n'ime ihe ndị ga-akwali na ị na-agụnye gị Ọbá akwụkwọ, ndepụta ọkpụkpọ gị, gị na-atụ aro, aha njirimara gị, listi ọkpụkpọ ike site enyi gị na onye ị denye aha na, listi ọkpụkpọ kere site curators na ndị editọ na curators na nka onye ị na-eso, ọ bụrụ na ha bụ ndị dị na-eso na nke a Apple music ngwa.
Download Audio si YouTube na ndị ọzọ Pop Music Sites
> Resource> Music> Apple gbagwojuru Music